Taunggyi - The Cherry Land: တောင်ကြီမြို့ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော် ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား
ဒီ Post ကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Live Webcast မကြည့်လိုက်ရတဲ့ သူတွေအတွက် ရေးလိုက်ပါတယ်..
ဒီနေ့ မနက်ကစပြီး ကျွန်တော်တို့ တတွေ WebCast လုပ်နိုင်ဖို့ လုံးပန်းခဲ့ကြပါတယ်.. မနေ့က ညနေအထိ Internet Upstream က လုံလောက်အောင် မရသေး.. Quality ကောင်းကောင်းနဲ့ လွှင့်နိုင်ဖို့ BitRate များများနဲ့ Internet ပေါ် Upဖို့ လိုတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့တတွေ ဟိုပြေးလိုက် ဒီပြေးလိုက်၊ ဟိုပြောလိုက် ဒီပြောလိုက်နဲ့ UpStream တိုးအောင် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြရပါတယ်..
မနက် ၉နာရီလောက်ရောက်မှ Server နဲ့ Upstream ပြသနာက ပြေလည်သွားခဲ့ပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့လဲ အရမ်းကို ၀မ်းသာသွားပြီး၊ အကြိုအောင်ပွဲလေး. မောခမ်း ဆိုင်မှာ လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.. Website ရဲ့ Theme ကလဲ မနက်ပိုင်းမှာပဲ ပထမအဆင့် ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်..
အဲ့ဒီလို အဆင်ပြေသွားတဲ့ အချိန်က စပြီး.. Live အနေနဲ့ မနှစ် တန်ဆောင်တိုင်ပွဲက Video တွေကို စမ်းသပ် လွှင့်တင်ခဲ့ပါတယ်.. တစ်ဘက်မှာလဲ ICT Exhibition လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ တာဝန်ကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ အဲ့ဒီဘက်လဲ ပြေးကြရပါသေးတယ်..
အဲ့ဒီလိုနဲ့ Server မှာ ကိုကျော်စွာက စောင့်ရင်း Live တင်ပေးနေပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့ကတော့ ညနေဖွင့်ပွဲအတွက် လိုအပ်တာတွေ ရှာဖွေယူရင်း ပြေးလွှားခဲ့ကြပါတယ်..
၅နာရီ ထိုးတော့ တောင်ကြီးသားတွေရဲ့ ခြေဦးတွေက မီးပုံးပျံကွင်းသစ်ဆီကို လှည့်လို့ တရွေ့ရွေ့ ချီတက်နေကြပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့လဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Live လွှင့်တဲ့ အခန်းလေးဆီ အချိန်မီရောက်အောင် ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်.. ကွင်းထဲမှာလဲ အားလုံးက ပွဲစဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပြီ.. အချိန်တွေကလဲ မြန်သွားသလိုပဲ.. အလင်းကလဲ ချက်ခြင်းဆိုသလို ပြောက်သွားခဲ့ပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့လဲ Live အတွက် Camera ပြင်သူပြင်.. Post တင်သူတင်.. Webcast အတွက် လုပ်သူလုပ်နဲ့ အားလုံး အလုပ်တွေ ရှုပ်နေခဲ့ကြပါတယ်..
နောက် ၆နာရီလဲ ထိုးရော. ၁၃၆၉ခုနှစ် တောင်ကြီးမြို့ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော် စတင်ဖွင့်လှစ်ပါတော့မယ်လို့ ကြေငြာလဲပြီးရော.. စက်ခလုပ် နှိပ်လို့ မီးပန်းတွေ ရှို့လိုက်ပါတယ်.. ဒုံး.. ဒုံး... ဒုံး... ဆိုတဲ့ ကြယ်လောင်တဲ့ အသံကြီးနဲ့ အတူ မီးပွင့်ကြီး၊ မီးပန်းကြီးတွေ ကောင်းကင်မှာ ဖြာကြလာပါတော့တယ်.. ဟေး... ဟေး.... ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်း.... ဆိုတဲ့ လက်ခုပ်သြောဘာ သံတွေနဲ့ အတူ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲကြီးက စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်..
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ထဲက တစ်ချို့လဲ Camera တစ်ယောက်တစ်လုံး အသီးသီးဆွဲလို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ အပြေးကွင်းထဲကို သွားခဲ့ကြပါတယ်.. ဆက်တိုက်ဆိုသလိုပဲ ကလေးတွေက မီးပုံးတွေနဲ့ ပုံဖော်ကြသလို.. ဘင်ခရာအဖွဲ့တွေ.. အကအဖွဲ့တွေကလဲ တီးမှုတ်၊ ကပြကြပါတယ်.. ရိုးရာအကတွေ၊ မီးပုံးအကတွေနဲ့ အတူ `` တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ အထင်ကရပွဲတော်´´ သီချင်းသံကလဲ မြူးကြွလို့ ပျံလွှင့်နေပါတယ်..
အဲ့ဒီအကအဖွဲ့ ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ မီးပန်းတွေ၊ မီးရှူးတွေ စတင်ပစ်ဖောက်ပါတော့တယ်.. ကျွန်တော်လဲ အစက Studio 35က ဖမ်းထားတဲ့ Monitor က ကြည့်နေရင်း မနေနိုင်တော့ဘဲ အခန်းအပြင်ကို ထွက်လို့ Fire Work တွေရဲ့အလှကို တ၀ကြီး ကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်.. မီးပန်းတွေရဲ့ အလှအပကိုကြည့်ရင်း.. ပါတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကိုလဲ မေ့သွားတော့တယ်.. အားလုံးရဲ့ အံသြခြင်း အသံတွေ၊ အားပေးခြင်း လက်ခုတ်သံတွေ ကြားနေရရင်း ကြည့်လို့ကို မ၀နိုင်တဲ့ လင်းထိန်နေတဲ့ ကောင်းကင်ကြီးကို ငေးလို့ နေခဲ့ပါတယ်.. မီးရှူးတွေကလဲ တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုး.. တစ်ခုပြီးတစ်ခု အဆက်မပြတ် ဆက်တိုက် ကောင်းကင်ကို ထိုးတက်လို့ လင်းထိန်ဖြာဆင်း နေပါတယ်..
ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေကလဲ ကွင်းထဲမှာ ကကွက်တွေပုံဖော်လို့ ပျော်မြူးနေကြပါတယ်.. နေကြာပန်းပုံ၊ ရှမ်းအိုးစည်ပုံ၊ ရှမ်းအလံ ပုံတွေကို ၁၅မိနစ်ကြာ ၅ခါ ပုံဖော်သွားခဲ့ကြပါတယ်.. မီးပန်းတွေကလဲ မရေတွက် နိုင်အောင်ကို မရပ်မနား လွတ်ဖောက်နေပါတယ်.. အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ စိန်နားပန် မီးပုံးပျံ (၅)လုံး တစ်ပြိုင်တည်း မှိုင်းခံပြီး လွှတ်တင်နေပါတယ်.. အဲ့ဒီ စိန်နားပန်တွေမှာ ပါသွားတဲ့ မီးပန်းတွေ၊ လှေထီးအိမ်တွေကလဲ ကောင်းကင်မှာ လွင့်ပျံနေပါတယ်.. တစ်ခါတစ်ခါ မြေကြီးအထိ ကြလာတဲ့ မီးပွားတွေကြောင့် အောက်တည့်တည့်မှာရှိတဲ့ ကွင်းထဲက ကလေးတွေကို ပူပန်လို့ ဟာာာ လို့ ဟင်...လို့ ထွက်ထွက်.. လာတဲ့ အသံတွေကိုလဲ ကြားနေရပါတယ်.. ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေကလဲ ဒီလိုပွဲကြီးမှာ ပါဝင်ရလို့ ပျော်ရွှင်နေကြပြီး.. အပူအပင်မရှိ သူတို့ရဲ့ ကကွက်ကို ရအောင် ပုံဖော်သွားခဲ့ကြပါတယ်..
မီးပုံးပျံတွေ တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး တက်သွားပြီးတဲ့ နောက်မှာလဲ မီးပန်းတွေ ထက်ဖောက်ပြန်ပါတယ်.. ဘယ်နှစ်ကြိမ်မြောက်မှန်းကို မသိတော့နိုင်တော့ဘဲ ကျွန်တော်တို့လဲ Internet က Live ကြည့်လို့ရကြရဲ့လား.. အဆင်ပြေရဲ့လား ဆိုပြီး.. ဒီလိုပွဲမျိုး အားလုံးကို ကြည့်စေချင်တဲ့ စိတ်တွေနဲ့ အခန်းထဲပြေးဝင်လိုက် အပြင်ပြန်ထွက်ကြည့်လိုက်နဲ့ လူးလာခေါက်တုံတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်.. ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့သူတွေကလဲ ပုံတွေလာပြန်ပေးလိုက် ပြန်သွားရိုက်လိုက်နဲ့ အပြေးအလွှားဖြစ်နေပါတယ်.. အချိန် အားလုံးကို Speed နှေးပစ်လို့ ရရင်ကောင်းမှာပဲ.. အချိန်ကို မီအောင် လိုက်ရတာ အလျှင်ကို မမီနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့တွေ တွေးလို့ ဒေါသဖြစ်နေမိသေးတယ်.. Live ကလဲ Audio ပျက်လိုက် Computer တွေကလဲ ဟိုဟာဖြစ်လိုက် ဒီဟာဖြစ်လိုက်နဲ့ အစဆိုတော့ အဆင်ပြေအောင် တော်တော် လုပ်ယူခဲ့ကြရပါတယ်.. Live လွှင့်ခြင်းဆိုတာရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေလဲ ကောင်းကောင်း ရလိုက်ပါတယ်.. အားလုံးလဲ ဖတ်ဖတ်ကို မောလို့ ပင်ပန်းနေခဲ့ကြပြီ..
သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားလဲ ပြီးဆုံးသွားပါတယ်.. တကယ်တော့ ၁နာရီကျော်အောင် ကြာပါတယ်.. စိတ်ထဲမှာတော့ ခဏလေး၊ တအောင့်လေး ဆိုသလို မြန်ဆန်လွန်းတယ်လို့ ခံစားနေကြပါတယ်..
ကျွန်တော်တို့လဲ Photo တွေ ချက်ခြင်းတင်ပြီး.. Live ကို အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်.. အားလုံးလဲ ကြေနပ်သွားကြမယ်လို့ တွေးပြီး ကျွန်တော်တို့တတွေ စိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ ပီတိဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်.. မြန်မာပြည်မှာလဲ တစ်ခါမှ မလုပ်ခဲ့ဘူးသေးတဲ့၊ Webcasting ကို ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ လွှင့်တင်နိုင်ခဲ့သလို.. ပွဲတော်ကြီးကလဲ အထူးခြား အဆန်းအပြားဆုံး ဖြစ်ခဲ့လို့ ပိုပြီးတော့ လုပ်ရကျိုးနပ်သလို ခံစားမိခဲ့ကြပါတယ်.. ၇နာရီ ထိုးခါနီး မိနစ် အနည်းငယ် အလိုမှာတော့ ၁၃၆၉ခုနှစ် တောင်ကြီးမြို့ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်ကြီး အောင်မြင်စွာနဲ့ပဲ ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်..
ကျွန်တော်တို့လဲ နောက်နေ့အတွက် ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ အားခဲရင်း၊ ပြောမဆုံးနိုင်တဲ့ ဆန်းပြားထူးခြားတဲ့ ပွဲတော်ကြီးအကြောင်းကို ဆွေးနွေးရင်း အိမ်ကို အသီးသီး ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်.. လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ လူတွေစည်ကားများပြား ပြည့်ကြပ်စွာနဲ့ တိုးဝေ့လို့ သွားနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်..
အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲ ပထမနေ့ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Live Webcast ထုတ်လွှင့်မှု အစီအဉ်တွေ ပြီးဆုံးခဲ့ပါတော့တယ်..
ရေးသားသူ yma အချိန် 12:59:00 AM
ဖြေးဖြေးပြော.. နားနားပြီးပြော မောနေမယ်...း)
လိုက်ဖ် မကြည့်လိုက်ရပေမဲ့ ရေးထားတာကို
လိုက်ဖ် ကြည့်နေရသလိုပဲ.. တောင်ကြီးသားတွေရဲ့ အားထုတ်မှုနဲ့
အဲဒီလိုက်ဖ်တွေကို ဆေ့လုပ်ထားပြီး နောက်ရက်တွေမှာ
ပြန်လည် ပြသနိုင်ပါစေလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ပျော်ရွှင်ပါစေ တန်ဆောင်တိုင်ရေ.. တောင်ကြီးသားတွေရေ..
နောက်နှစ်တွေမှာ ပြန်လာနိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်....
Sunday, November 18, 2007 1:20:00 AM
Live Broadcast အတွက် လူရောစိတ်ပါ အပင်ပန်းခံပြီး ကြိုးစားတင်ဆက်ပေးတဲ့ TaunggyiCherryLand အဖွဲ့သားတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ...
Sunday, November 18, 2007 1:39:00 PM
Saturday, May 09, 2020 8:57:00 PM